လောင်းကစား နယ်ပယ်မှအမျိုးသမီးများ - Myanmar Online Game
လောင်းကစား နယ်ပယ်ဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အမျိုးသမီးများလောင်းကစားပြုလုပ်နှုန်း မြင့်တက်လာခြင်းပါ။ ဒီလိုအမျိုးသမီးများ လောင်းကစားပြုလုပ်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေ လောင်းကစား ပြုလုပ်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့လား? လောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်း အမူအကျင့်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး ဘာတွေကွာခြားသလဲ? လောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အားသာချက်ကဘာလဲ? စတဲ့အချက်တွေကို ပြောပြသွားမှာပါ။
အမျိုးသမီးတွေ လောင်းကစားပြုလုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ပုံစံဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့များစွာ ကွဲပြားပါတယ်။ မတူညီတဲ့ ကာစီနိုဂိမ်း တွေကို အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက ကာစီနိုကို တစ်ယောက်တည်းသွားတတ်တဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေကတော့ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးသွားလာရတာကို ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အနိုင်ရခြင်း၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်းပေါ်မှာလည်း အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက စိတ်ခံစားချက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုတွေ ပိုမိုတုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ ကာစီနိုဂိမ်းတွေထဲမှာက Slot Game တွေကို အမျိုးသမီးတွေပိုမိုနှစ်သက်ပါတယ် လေ့လာချက်တွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဂိမ်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အလျှောက် ဂိမ်းတွေကိုကစားရာမှာလည်း အုပ်စုဖွဲ့ကစားရတာကို ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီ့အပြင် အခြားသောကစားနည်းတွေထက် Slot ဂိမ်းတွေကို ပိုမိုကစားလေ့ရှိပါတယ်။
Slotဂိမ်းတွေဟာ အခြားသောဂိမ်းတွေလို ၁ဆ၊ ၁ဆခွဲ လျော်ကြေးပေးတာမဟုတ်ပဲ အဆပေါင်းများစွာ ပြန်လည်ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကာစီနိုအတွင်းကဂိမ်းတွေထဲမှာ လျော်ကြေးအမြင့်ဆုံးဂိမ်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ အုပ်စုလိုက်ကစားရင်း အတွေ့အကြုံကို မျှဝေရတာပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အလျှောက် Blackjack လိုနည်းဗျူဟာဂိမ်းဟာ အထီးကျန်ဆန်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် နည်းဗျူဟာဂိမ်းတွေထက် ပျော်ရွှင်မှုကိုပိုမိုမျှဝေနိုင်တဲ့ Slot ဂိမ်းတွေကို ပိုမိုကစားလေ့ရှိပါတယ်။
Slotစက်တွေဟာ အမြင်အာရုံပိုင်းအရ အခြားသောဂိမ်းတွေထက် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ တောက်ပသောအရောင်တွေ၊ တီးလုံးအသံတွေနဲ့ ဂိမ်းစက်တွေရဲ့အသွင်အပြင်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
Slotစက်တွေဟာ တစ်ပွဲကစားဖို့ အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းသာ ကြာမြင့်တဲ့အတွက် လောင်းကြေးထည့်ပြီး အချိန်အကြာကြီးစောင့်ဖို့မလိုပါဘူး။
အမျိုးသားတွေဟာ ပိုကာနဲ့ Blackjack လိုမျိုး နည်းဗျူဟာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ မှတ်သားနိုင်မှုတွေလိုတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး သူတို့အနိုင်ရနိုင်လောက်မယ်ထင်တဲ့ဂိမ်းတွေ၊ အနိုင်ရရှိဖို့အခွင့်အလမ်း များတဲ့ဂိမ်းတွေ၊ ဒိုင်ရဲ့အနိုင်ရရှိနိုင်နှုန်း နည်းတဲ့ဂိမ်းတွေကို ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကံတရားနဲ့ အလောင်းအထပ်ပြုလုပ်ရတဲ့ဂိမ်းတွေကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြပြီး အနိုင်ရရှိနိုင်နှုန်း၊ နည်းဗျူဟာ စတာတွေကို နားလည်ဖို့ မကြိုးစားကြပါဘူး။
အမျိုးသားနဲ့အမျိုးတွေဟာ ရှုံးနိမ့်မှုအပေါ် ကွဲပြားစွာဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ ရှုံးပွဲများလာတာနဲ့အလျောက် ဒေါသနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုမိုဖော်ပြကြပါတယ်။ Slotကစားနည်းအတွက်ဆိုလျှင် ပိုမိုဖော်ပြတတ်ပါသေးတယ်။ စက်ကိုကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထုရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ပြီး စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကို ဖြေဖျောက်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ရှုံးပွဲများလာတဲ့အခါ ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုကို ဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ ငိုကြွေးခြင်း ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားခြင်းတို့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။
နယူးဂျာစီကာစီနိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့စစ်တမ်းအရ လောင်းကစားပြုလုပ်ရာမှာ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ် ရရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ လောင်းကြေးငွေရဲ့ ၁၉.၇၉ ရာခိုင်နှုန်းသော အကျိုးအမြတ်ကို ပြန်လည်ရရှိကြပြီး အမျိုးသားတွေထက် ၄.၆ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုအနိုင်ရရှိပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ ဒေါသဖြစ်လွယ်တဲ့အတွက် အမှားတွေပြုလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ အမျိုးသမီးများဟာ လောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်းမှာ အတွေ့အကြုံသစ်ရဖို့၊ ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ကို ပိုမိုအသားပေးတဲ့အတွက် ရှုံးနိမ့်ခြင်းမှာ ဒေါသဖြစ်မလွယ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသားတွေလို လောဘကြီးခြင်း၊ အရှုံးကိုမဲပြီး ငွေလိုက်ထိုးခြင်းတွေ မရှိတာက အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။